साउन ३० देखि भदौ ९ सम्म चितवनको यात्राः कसरी हिरो बने रवि? | BeniOnline.com.np जिल्लाका ताजा अनलाइन समाचार
Home समाचार राष्ट्रिय समाचार साउन ३० देखि भदौ ९ सम्म चितवनको यात्राः कसरी हिरो बने रवि?
२०७६, ९ भाद्र सोमबार २१:०९
सञ्चारकर्मीद्वयलाई अनुसन्धानका लागि प्रहरीले नियन्त्रणमा लियो । अदालतमा उपस्थित गराई थुनामा राखेर अनुसन्धान गर्न म्याद थप ग¥यो । अपराध अनुसन्धान गर्ने क्रममा यो सामान्य प्रक्रिया हो । सबै घटनामा हुने यस्तै हो । तर, अहिले परिस्थिति फरक छ ।
निराशा नै निराशा फैलिरहेको समाजमा रविको छवि ‘आशा’ जगाउने बन्दै गयो । त्यसैको प्रतिबिम्ब हो अहिले अनुसन्धानका लागि हिरासतमा मात्र राख्दा पनि उनलाई फँसाउन खोजियो भन्दै सडकमा उत्रिएको भिड । अन्ततः रवी र युवराजलाई अदालतले तारेखमा छाडेको छ । भलै मुद्दाको अन्तिम किनारा लाग्न बाँकी छ । news24nepal.tv
Previous articleरवि लामिछाने यसरी निकालिए अदालतबाट, चितवनमा ओर्लियो जनसागर (भिडियो)
Next articleन्यूर्योकमा बस्ने म्याग्देलीले मनाए तीज (फोटो फिचर)